“Waxan uga mahadnaqaya madaxweyne-ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arrintii aannu isku qabannay, waa nin xisbiga raggii dhisay kamid ah, dedaal badannina kasoo galay, isaga oo u tudhaya xisbigii uu Aasaasayaashiisa kamid ahaa, maanta inuu iiga tanaasulo wuxuu iga mudan yahay mahad.” Wasiirka wasaaradda Ganacsiga, dalxiiska iyo wershedaha, Mudane Maxamuud Xasan Sacad (Saajin). | ToggaHerer
← Mudane Saylici oo maanta shaaciyey inuu ka tanaasulay damaciisii ahaa inuu mar kale kursigaas u tartamo
ARDAYGII GEESIGA AHAA! Q: Maxamed Haaruun →
“Waxan uga mahadnaqaya madaxweyne-ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arrintii aannu isku qabannay, waa nin xisbiga raggii dhisay kamid ah, dedaal badannina kasoo galay, isaga oo u tudhaya xisbigii uu Aasaasayaashiisa kamid ahaa, maanta inuu iiga tanaasulo wuxuu iga mudan yahay mahad.” Wasiirka wasaaradda Ganacsiga, dalxiiska iyo wershedaha, Mudane Maxamuud Xasan Sacad (Saajin).